Proojaktiin buufata rabsaa fi daddabarsa humna elektirikaa Yaaballoo hojii eegale. Leave A Reply Cancel Reply. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Manneen Murtii hojiirra oolmaa labsii yeroo ariifachiisaa….
Proojaktiin buufata rabsaa fi daddabarsa humna elektirikaa…. Fana: At a Speed of Life! Naannon Oromiyaa geejibni magaalaa keessaa fi geejiba ummataa naannoolee qaxxaamuran guutummaatti akka dhaabbatan murteesse On Mar 30, Finfinnee, Bitootessa 21, FBC — Mootummaan naannoo Oromiyaa geejibni magaalaa keessaa fi sochiin geejiba ummataa naannoolee qaxxaamuran guutummaatti akka dhaabbatan murteesse. Ibsi guutun kinooti. Geejjibni magaalaa keessaa kan akka taaksii,baajaajii, mootor saayikilii.
Ogeessotni fayyaa soorama bahanii fi barattootni ogummaa fayyaa barachaa jiran waamichi lammii isaanii baraaruuf tajaajila lammummaa akka kennani godhamuufi waan maluuf waamicha mootumaan taasisuuf akka of qopheessani. Manneen hojii moootummaa tajaajila kennuu kan itti fuf. Mootummaa Naannoo Oromiyaa. You might also like. Oduu biyya keessaa. Prev Next. Leave A Reply. More Stories. Apr 14, Prev Next 1 of Mangistuu Asaffaa Daadhii tiin. Qabsoon bifa adda addaa qaba. Jiruudhaan itti fufuuf diina ficcisuun amaluma uumaati survival instinct.
Jiruun hawaasaa ammoo fedhii fi qabeenya walitti nama buusaniin bones of contention kan guutameedha. Isaanis, qabeenya fi aangoo siyaasaa dabalatee waan baayyee dha. Sabni hunduu kana keessa darba, kana keessa jiraata. S eenaan akkuma himu qabsoon hin dhaabatu. Sabni qabsoo dhaabu hin jiraatu. Garuu qabsoon bifa jijjiirata, tooftaa haaraa mijeeffata.
Walumaa galatti Qabsoon hin dhaabatu, bifuma jijjiirata. Waggoota shantamman darban keessatti garuu kaayyoon qabsoo saba Oromoo garbummaa ofirraa kaasuun hiree biyya Itiyoophiyaa keessatti seenaa fi siyaasaan qabu sadarkaa guddaa irraan gahuu kaayyeffatee finiinaa ture. Itti fayyadamni siyaasdinagdee firii qabsoo keenyaas guutummaatti hirmaanneerra jedhanii afaan guutatanii dubbachuun nama dhiba.
Waggoota dheeraaf Oromoon siyaasa Itiyoophiyaa keessatti fincila Farra Cunqursaa fi tiksa aadaa, seenaa fi duudhaa isaa irratti hirmaatee ture. Yeroo keenya baayyes kanarratti dabarsine. Qabsoo kana eenyutu eegale? Akkamitti eegalan? Maal kaayyeffatan? Firii isaa eenyutu qooddate? Fuulduree qabsop kanaaf hoo furmaata fi yaada qabsoo waaraa irratti akkamiin hojjetamaa jira What are the prospects, trends and roadmaps being built for sustainable enrichment and fostering the advance OROMO cause?
Jibba walirratti akka kuufannu nu taasisa. Haalonni fi taateewwan akkasii kanaan duras akka ture ni beekna. Baayyee nama gaddisiisa. Gatiin kanaan dura yeroo diinaan lollu baafne gumaan isaa bilisummaa fi badhaadhina dhaloota hafeeti. Itti Gaaffatamaan Eenyu?
Akka waliigalaatti balleessaan kanaa warruma qabsoo Oromoo geggeessina jedhuu dha. Hunda isaanii, hunda keenya. Gaggeessummaan qabsoo uummataa fedha dhaaba siyaasaa, kan dhuunfaa fi fudhatama argachuu fi dhabuu irra darba. Abbummaa qabsoo fi tarkaanfii gatii nama kafalchiisu fudhachuun kan uummataati.Hiccitii diini Oromoo fi Oromiyaa diiguuf Mootummaa Itoophiyaatiin gargaarama hojiiti hikaa jiru saaxiluu: Kutaa 1ffaa.
Finfinnee fi Bahaar Dar irratti dhoksadhaan dhumaa Fulbaana A. I marii taasiisan. Toftaleen kunis; —. Oromooti heeruumuu fi Oromoo fuudhuu; san boodaa immoo maatii isaanii fi firootan isanii naannoo Amaraatii fidanii waraqaa eenyummaa baasuun qubachiisuu. Baruma wanta kana karoorfatan Onkololeessaa irraa egaalaanii lafa seeraan alaa qabachun manoota seeraan alaa ijaaru itti fufee jira. Manoota jireenya qofa oddo hin taane Bataskaanaa Godina addaa Finfinnee keessati bakken adda addaatis ijaara jiru.
Gabaabumati Fakkenyaaf. Bara kana, bara kanas Laga Xaafoo keessatti qofa maneen seeraa qabeessaa Kuma sadii kaan bitanii kaan ijaaraani ittii galani jiru. Jara kanaaf Dr. Hanga ammaa mana 60f bishan galee jira. Abyyii Ahimed biraa deemanii kadhatan. Isaa boodaa innis Lammaa Magarsaa sossoobee dhaabsiisee.
Yeroo san Abyyii lama duubaan namoota baayyeetu jira jedhe wan sodaatuuf sodaachisee oddo hin taane siyaasa keenya nu jalaa baleesaa ammaf dhiisi yeroo bira itti deebina jedhe gowomseeti. Sababumaa Lammaa Magarsaa Imamataa Nafxanyootaa kana fashaleessuuf ejjennoo qabatee Abyyii suuta jedhee Lammaa aanggoo irraa kaasee.
Miilaa hin shokoksineen Naafxanyaan Oromiyaa dhuunfachaa jirti. Guyyaa seenaa qabessii kunis, Fubana15, Hooggantooni isaanii Mootummaa biyyaa bulchaan keessaa jiraaniis aanggoo argatanittii fayyadamanii Sagantaa kana akka rawwatan waliigalaan.
Sagantaa qabxiiwan biroo Oromiyaa ittiin diigaan qorannoo kana kutaa 1ffaa keessatti kan ibsaameen alatti kan armaan gadii kunis akka rawwatamuu waliif gala, isaanis. Abyyii Ahimediif yaada dhiyeessuun Recommendation akka muudamaan tasiisuu. Isaa boodaa muudamaan sun waajjiraa isaa keessatti Amaaraa hedduu naannoo Amaaraatii fudhanii akka qaxaraan tasiisuu.
Gaaffiileen Oromoon kaasaa jiruu kaneen akka Finfinnee fi Afaan Oromoo akka hin rawwaataamne dhiibbaa tasiisuun qabsoo duraa dhaabachuu. Fayiidaan Oromiyaan Finfinnee irraa argatu jedhu guutumaan guutuuttii akka heera mootummaa irraa haqamuu qoraannoon gaggefamee akka yaadaattii Mootummaa Abyyii hogganuuf akka dhiiyyeessaan.Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagaa fi Kibbaan ammoo Gujii keessatti mul'atu balaaleffachuuf, hawaasni Oromoo Amerikaa, kutaa biyyaa Waashingitan DC fi naannawaa jiraatan dhaabbilee mootummaa Ameerikaa fuulduratti mormii dhageessisan.
Godinaaleen Wallaggaa bulchiinsa komaandi postii jalatti buluu erga jalqabanii waggaan tokko darbeera. Dabalataan dhiyeenya kana ammoo tajaajilli interneetii godinaalee wallaggaa bakka garaagaraa keessatti addaan citeera. Tajaajilli bilbilaas adda cituun ammoo maatiin bakka jiru irraa akka wal hin iyyaaffannee fi yaaddoo keessa akka jiraatan isaan taasisuu namootni BBC'n dubbisee ture himaniiru.
Boordii hawaasa Oromoo bakka bu'uun hojjechaa akka turan kan himan Obbo Tolchaan, tajaajilli interneetii Wallaga irraa adda cituun sagaleen isaanii akka hin dhagahamne ukkaamsuudha jedhan. Mormii keenya mootummaan Itoophiyaas beekee rakkoo uummanni keessa jiru kana hiikuu qaba jenneeti mormii keenya dhageessisuuf kan murteessine jedhan. Namni biraan dubbisne jiraataa Meeriilaandi kan tahe Obbo Tashomaa Diimee, uummatni keenya yeroo dheeraaf qabsoo keessa ture jedhan.
Haa tahu malee waggoota lamaan kana jijjiiramni ni dhufa jennee eegaa turrus waanti isa duraan ture irraa addatti uummata Oromoof jijjirame hin jiru jedhan. Ummatni ammayuu dararamaa jira jechuun komaandi postii fi tajaajilli interneetii fi bilbilaa godinaalee Wallaggaa irraa addaan cites akka sirratuuf sagalee keenya dhageessisaa turre jedhan.
Hirmaattuun biraa dubbisne Aadde Dinqinesh Dheeressaa ''interneetii fi bilbilli cufamee waraanni bobbaafamuun waan uummata keenya irra gahaa jiru addunyaan haa beeku jenneeti, warra sagalee hin qabneef sagalee tahuuf mormii kana irratti kanan hirmaadhe jedhan.
Qindeessaan hiriirichaa Obbo Tolchaan Baankiin Adunuyaa, IMF fi Waayit Haawus maaliif filataman gaaffii jedhuuf maallaqaa isaan deeggarantu meeshaa waraanaa uummatni keenya ittiin du'u bita waan taheef akka beekaniifi jedhan. Itoophiyaan Baankii Addunyaafi IMF irraa maallaqa deeggarsaa gara doolaara biliyoona shanii argatte, diinagdee biyya keessaa haaromsuu fi guddisuuf akka itti fayyadamtu ibsitee ture.
MM Abiy Ahmad akkuma aangootti bahaniin osoo hin turiin gara Ameerikaatti imaluun, lammiilee Itoophiyaa biyyicha jiraatan waliin mari'atanii ture. Yeroo sanas simannaa guddaan akka taasifamee fi diyaasporaan diinagdee biyyaa jajjabeessuu keessattis shoora isaanii akka bahatan taasisuuf hojjetaa turan. Haa tahu malee waggaa tokkoon booda haalli nageenyaa godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti mudataa jiru akka mormiin isaan mudatu taasisaa jira.
Humna Waraanaa Bilisummaa Oromoo jedhamu kan Marroo Dirribaan hogganamuu fi waraana mootummaa gidduutti yeroo baay'ee dhukaasni gaggeeffamaa akka ture jiraattotni ni himu. Rakkoon kun hammaachaa adeemuun gama lamaan miidhamaa akka jiran jiraattotni komii qaban dhiyeessaa turan. Namootni nagaan hojii guyyuu hojjetatanii jiraatanii fi qondaaltotni mootummaas Lixa Oromiyaa bakka garaagaraatti ajjeefamaa akka turan ni himama.
Gama mootummaan deebiin jiru WBO bosonatti hafetu raawwate kan jedhu yoo tahu hidhattootni bosona jiran ammoo yeroo garaagaraatti gochaa kana akka hin raawwanne himu.
Yeroo dhiyoon as ammoo mootummaan Lixa Oromiyaa godinaalee wallaggaa bakkeewwan garaagaraa keessaa tajaajila interneetii fi bilbilaa cufuun komii guddaa kaaseera. Filannoo Biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf haalli bulchiinsa komaandi postii kun mijataa miti jedhan xiinxaltootni siyaasaa dubbisne.
Jiraattotni bilisa tahanii akka sagalee isaanii hin kennineefi duula na filadhaa gaggeessuufif rakkoo tahuu danda'a kan jedhe ogeessa seeraa fi siyaasa Itoophiyaa kan xiinxalu Dr Heenook Gabbisaati. Dr Alamuu Simee marii paartileen siyaasaa guyyaa filannoo ilaachisuun boordii filannoo waliin gaggeessan irratti komaandi postiin rakkoo akka hin uumneefi haaluma amma jiruun akka itti fufu himanii ture. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa balaaleffachuuf hawaasni Oromoo Waashingitan DCtti hiriira mormii gaggeessan 25 Amajjii Image copyright Tashoomaa Diimee Goodayyaa suuraa Hawaasni Oromoo Waashingitan DC fi naannoo ishee jiraatan rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa balaaleffachuuf hirira bahan Rakkoo nageenyaa Lixa Oromiyaa godinaalee Wallagaa fi Kibbaan ammoo Gujii keessatti mul'atu balaaleffachuuf, hawaasni Oromoo Amerikaa, kutaa biyyaa Waashingitan DC fi naannawaa jiraatan dhaabbilee mootummaa Ameerikaa fuulduratti mormii dhageessisan.
Oomishtoonni bunaa lixa Oromiyaa maal keessa jiru? Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Lixa Oromiyaa: Oomishtoonni bunaa 'Komaandi Postii' jala jiran hojjetachuu dadhabne jedhu.
Marroo Dirribaa: 'Akkuma barame maqaa balleessuuf malee barattoota ugguruu keessaa harka hin qabnu'. Isin hin darbiin.Isaan kun lamaanuu Oromoodhaan ijaaraman; Oromoof hojjechuuf uumamna; isaan lamaanuu Sabbontota keenyaan uumaman. Asirratti, rakkoon jiru maali? Kanaafan dhimma kanarratti yaada koo dhiyeessuuf mata duree kana filadhe. Egaa, asirratti ololli gama lamaan deemu kun eessaa dhufe? Akka waliin hin hojjetne kan isaan taasisu rakkoon hin beekamne jiraa?
Maaliif yaamicha waliif godhan kabajuu dhiisan? Maaliif dhaabbata tokko waliin ijaaruu dhiisanii gara garatti uumaman? Gaafiilee kaan akkuma jiranitti dhiisee, mee gaafii isa duraa: Ololli gama lamaan deemu kun eessaa dhufe?
Ani akka hubannoo kiyyaatitti, Oromoota garee adda addaatti baaseen ilaala.
Gareelee Oromoo armaan olitti tarreeffaman kanaa ala ammoo warri Afaan Oromoo sirriitti beekan garuu dhalootaan ykn dhiigaa fi fooniin Oromoo hin taane; maqaa Oromoo moggaafatanii dhimma Oromoo dubbachuu fi barreessuu irratti gahee guddaa taphachaa jiraniis jiru.
Isaan akkanaa kuni fi Oromootni garee afraffaa keessa jiran warra dhimma Oromoorratti halkanii guyyaa olola hin qabatamne garuu akkaataa nama amansiisuun ykn afaanfaajjesuun uummata keenya sammuu naannessaa jiranii dha jedheen yaada, amanas.
Keessumaayuu yeroo ammaa kana keessatti diinatti xiyyeeffachuu dhiisanii walitti xiyyeeffachuun Sabbontota keenyarraa ni eegama jedhee yaaduun na rakkisa. Haala uummatani keenya keessa jiru dagachuu dha. Dhugaan kun hunda birattuu sirriitti hubatamuu qaba. Innis Wayyaanee nama-nyaataa kana hundeedhaa buqqisanii; uummatni keenya bilisummaadhaan hiree ofii akka murteeffatu taasisuu dha. Isa kanarratti asii fi achi jechuun hin jiru.
Isaan lamaanuu qabeenya Oromoo ti, lamaanuu Oromoof uumaman, lamaanuu beektotaa fi hayyoota Oromootiin ijaarman. Isaan lamaanuu diinni walqixxummaadhaan ittixiyyeeffata; isaan lamaanuu xiyyeeffannaa ololaa ti.
Abdii Boruu: aboruu gmail. Milkeessaan buutame jira! Caqasi Leenjii Bilxiginnaa! Abiy vowed to pick up his military uniforms i. Share this: Share Email Print Facebook.Hidhaa jumlaa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti raawwateen torbee tokko kana qofatti miseensonnii fi derggartonni isaa ta'an hidhamuu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise.
Dhaabichi kana kan jedhe ibsa haala yeroo irratti miidiyaaleef waajjira isaa muummeetti kenneeni. Fulbaana bara erga gara biyyaatti deebi'ee dhiibbaan siyaasaa dhaabicharra gahaa turuu kan himan hogganni olaanaa dhaabichaa Obbo Mikaa'el Booran, "ce'umsi akka hin gufanneef obsaa turreerra" jedhan.
Hidhaa iddoowwan adda addaatti taasifamaa jiru ilaalchisuun Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ibsa kaleessa baaseen, kanneen hidhamaa jiran namoota yakka raawwachuun shakkamanidha jedheera. Dhaabichi filannoo dhufuuf qophaa'aa jiraachuu himuun ammallee dhiibbaan miseensota kiyyarra gahu dabalaa dhufeera jedhe.
Bakkeewwan tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda citetti miidhaan uummatarra gahaa jiru akka hin dhaga'amne awwaalamaa jiraachuus himaniiru. Tibbana ammoo hidhaan jumlaa hacuuccaan siyaasaa miseensotaa fi deeggartoota isaarratti hammaachuu dhaabichi beeksiseera.
Torbee darbe qofa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti miseensonnii fi derggartonni isaa ta'an hidhamaniiru jedhe. Kanneen keessaa Buraayyuu, Laga Xaafoo, Caancoo, Amboo, Calliyaa fi kanneen biroo bakka hidhaan itti hammaate jechuun eeramanidha. Lakkoofsi namoota hidhamanii kunis kanneen torbee tokko dura hidhamanii fi dhimmisaanii mana murtiitti ilaalamaa jiran akka hin dabalannes dhaabichi himeera.
Komaandipostiin akka ka'u, iddoowwan tajaajilli bilbilaa citetti akka gadhiifamufis gaafataniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaas dhiittaa mirga namoomaa mul'atu irratti gaafatamasaa akka bahu dhaaman.
Haalli amma Itoophiyaa keessatti mul'atu faallaa sirna dimokiraasiti kan jedhan aanga'aan dhaabichaa, dhaabbileen mirga namoomaaf falmanis dhimmicha akka hordofuu qabaniif waamicha dhiheesseera. Filannoo dhufu kanarratti nageenyi amansiisaan uumamee mootummaan uummataan filatame akka hundaa'uuf qooda fudhattoonni hundi gaheesaanii akka bahaniifis dhaameera. Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo. Goodayyaa suuraa 'Hidhaan jumlaa fi hacuuccaan siyaasaa Oromiyaa keessaa na yaaddesse' - ABO Hidhaa jumlaa naannawa Finfinnee fi godinaalee Oromiyaa gara garaa keessatti raawwateen torbee tokko kana qofatti miseensonnii fi derggartonni isaa ta'an hidhamuu Addi Bilisummaa Oromoo beeksise.
Abbaan Alangaa namoota yakkaan shakkaman hidhuufi himachuuttin jira jedhe 'Furmaatni dhibdee nageenyaa Lixaa fi Kibba Oromiyaa sammuu keenyaan ala miti' 'Human Rights Watch' seera haasaa jibbiinsaa Itoophiyaa morme "Wal-dhabdee saboota fi naannoolee akkasumas namoota dhuunfaa fi gareelee jidduutti uumaman ka'uumsa godhachuun iddoowwan yakki itti raawwatametti shakkamtoonni to'annaa seeraa jala oolfamanii haala qindaa'een himannaan irratti banamuun eegalameera" jedha ibsi kun.
ABO'n maal jedhe? Uummanni Godina Qellem Wallaggaa haala akkamii keessa jira? Mata dureewwan walitti dhiyaatan Uummata Oromoo Siyaasa Itoophiyaa. Jalqabatti deebi'i. Odeessa kana irratti dabalata. Abbaan Alangaa namoota yakkaan shakkaman hidhuufi himachuuttin jira jedhe.
Isin hin darbiin.Oromoon saba Afrikaa keessa jiraatu, kan Itoophiyaa keessaa fi haga xiqqoo immoo ummata Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti argamu dha. Afaan dubbatamus Afaan Oromoo jedhama.
Afaan oromoo afaan Hawusaafi Arabiiffaati anee sadarkaa sadaffaarraati argama. Ummatni Oromoo ummata afaan kushi dubbatu kan bahaa fi kaaba baha Afrikaa keessatti argaman keessaa tokko dha.
Komediyaan Buzu'alam Asaffaa: Harka Harka ** NEW 2018 Oromo Music
Gaanfa Afrikaa keessa Oromoon saba kushii dubbatu guddicha dha. Akkaataan lafa, aadaa fi afaan isaa Oromoo Afrikaa keessa dabre immoo addunyaa keessatti akka beekamtu isa godheera.
Harold G. Jaarraa 17 jalqabee Oromoon Amaara irraa gargar bahuu jalqaban. Akkasumas waltajjii Gondar keessatti Afaan Oromoo akka dubbatamu taasise. Akkasumas Begemder, Enderases jalatti qoodamuu jalqaban. Oromoonni bara sunnitti beekkamoo turan keessaa 1. Bulchituu Menen kan Wollo, kan bara Empress taate.
Bulchituu Menen kan Ambaassel, kan haadha manaa Hayila Sillaasee taate. Humnaa fi maatii imperiyaalaa wajjin walitti qabamuf jecha ummatni Oromoo hedduun Kiristaanummaatti jijjiiramanii turan.
Itti fufee immoo, gara dhuma ffaatti, Emperor Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akka Kiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture.
Kun immoo gosa Oromoo lafa warra dhiisan akka gara kibbaatti godaanan warra godhee ture. Bakka dhiha baha irra eegalee hanga bahaatti tuutnitun: Ummani Wallaggaa ummata naannawa dhihaa jiraatu ummanni kun naannawa bishaanii jiraatan; Oromoo MaccaaLaga Dhidheessaa fi laga Oomoogidduu, kibba laga Gibee jiraatu.
Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Oromoo Gujiiwho are the southern part subgroup of the Oromo, inhabiting neighboring the Borena Oromo. Oromoo Beekkamoo Amaan Hedatoo political activist and new singer Abbabaa Abbishuu — political activist and prominent singer Abbaaduulaa Gammadaa — Perezidaantii naannoo Oromiyaa afraffaa fi hogganaa Dh.
Yousuf Dr. Sheek Bakrii Saphaloo- hayyuu fi ogeessa walaloo. Sirna barreeffama Qubee Afaan Oromoo kan boce.
Oromoo fi oromiyaa © 2020